Androany no andro tokony hitsidihanao an'i San Marino: Ny Fetin'i San Marino
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Androany no andro tokony hitsidihanao an'i San Marino: Ny Fetin'i San Marino
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao Mahafaly San Marino • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i San Marino dia anio. Amin'ny 3 septambra isan-taona, mankalaza ny fananganana ny San Marino Repoblika an-jatony taona lasa izay. Betsaka ny hetsika tokony hiainana sy ho vavolom-belona amin'izao andro izao, ao anatin'izany ny hetsika zana-tsipika, ny fifaninanana manofahofa saina, ary ny kaonseritra mahafinaritra nataon'ny miaramila.
Ny mpitsidika an'i San Marino dia afaka mividy visa amin'ny vidiny EURO 5,00, saingy hajia tsara ihany no ao amin'ny pasipaoronao, ary tsy misy fepetra takian'ny lalàna. San Marino dia mitovy hevitra amin'i Seychelles miaraka amina hafatra ho an'ny mpizahatany: "Namana amin'ny rehetra isika ary fahavalo tsy misy." San Marino dia paradisa ho an'ireo manangona hajia.
Ny sekreteram-panjakana amerikana androany dia namoaka izao fiarahabana izao ho an'ny mponin'i San Marino: Amin'ny anaran'ny vahoaka amerikana sy ny governemanta amerikana amerikanina, azafady mba ekeo ny firariana soa indrindra ho an'ny mponin'i San Marino rehefa mankalaza ny fetin'ny San Marino sy ny fananganana ny repoblika lehibe anao. Nandritra ny taonjato maro, San Marino dia nijoro ho ohatry ny fanahin'ny fahaleovan-tena. Ekenay ny maha zava-dehibe an'i San Marino ho repoblika tranainy indrindra eto an-tany ary manaja ny fanoloran-tenanao hatry ny ela momba ny demokrasia sy ny fitantanan-tena. Manisa an'i San Marino ho namana mpiray dina sy matanjaka i Etazonia ary manantena ny hanohy ny fiaraha-miasa izahay.
Ny fahatelo amin'ny volana septambra dia ny andro firavoravoan'i St Marinus, ilay Masindahy nanangana ny Repoblikan'i San Marino.
Aorian'ny fankalazana ny lanonana lehibe amin'ny Basilica St. Marinus, ny reliky ny olomasina dia entina mihetsika amina arabe ao an-tanàna. Ny tolakandro, aorian'ny fiafaran'ny fankalazana ara-pinoana, ny fety dia manana endrika malaza kokoa. amin'ny Cava dei Balestrieri fifaninanana zana-tsipìka atao, ary amin'ny Piazzale Lo Stradone ny Military Band dia manolotra kaonseritra, arahin'ny hetsika bingo malaza be. Mikatona ny andro amin'ny alàlan'ny fampisehoana afomanga iray manainga rivotra.
Talata 3 septambra
10.30 Famakiana ny Fanambarana ny zana-tsipika
Eny an-dalambe amin'ilay tanàna taloha
14.30 Fiaingana ny matso manan-tantara
15.00 Fivavaky ny zana-tsipìka ho an'ny Masina Masina
15.30 Fifaninanana Big Crossbow sy fampirantiana faneva
17.15 Parade manan-tantara manan-tantara
17.30 Kaonseran'ny tarika miaramila ao amin'ny Repoblikan'i San Marino
19.00 Hetsika Big Bingo
Ao amin'ny Repoblikan'i San Marino, ny fankamasinana ny Masina izay, araka ny angano, nanangana ny Repoblika, dia lalim-paka sy miely patrana. Ny angano dia milaza fa nandao ny nosy Arbe tany Dalmatia ity mpandrafitra vato ity ary tonga tany amin'ny Tendrombohitra Titano hanangana vondron'olona Kristiana kely maniry ny handositra ny fanenjehan'ny emperora Diocletian. Tamin'ny 301 AD, niforona ny vondrom-piarahamonina voalohany niandohan'ny Repoblikan'i San Marino.
Ny porofo voalohany amin'ny fahaleovantenan'i San Marino
Ny azo antoka dia efa nonina ilay faritra hatramin'ny vanim-potoana talohan'ny tantaram-piainana, fa ny antontan-taratasy voalohany manamarina ny fisian'ny vondron'olona voalamina iray ao amin'ny Mount Titano dia ny Placito Feretrano, parchment nanomboka tamin'ny 885 dc, voatahiry ao amin'ny State Archives.
Ny milisy mahazatra mandray anjara amin'ny lanonana ofisialy ary miara-miasa amin'ny polisy amin'ny fotoana sasany; ny mpikambana ao amin'ny Tarika Miaramila dia ao anatin'ny Militia tsy tapaka.
Miorina amin'ny lalàna sy lalàna any San Marino
Tamin'ny fotoana nanjavonan'ny fahefan'ny Fanjakana ary mbola tsy napetraka ny fahefana ara-nofo an'ny Papa, dia nanapa-kevitra ny hanome ny tenany ho karazana governemanta ny mponina eo an-toerana, toa ireo any amin'ny tanàna italianina maro hafa. Noho izany dia teraka tanàna afaka. Ny vondrom-piarahamonina kely teo amin'ny Tendrombohitra Titano, ho fahatsiarovana ilay olo-malaza Marinus, ilay mpikapa vato, dia niantso ny tenany hoe "Land of San Marino", avy eo "Tanànan'ny San Marino afaka" ary farany "Republic of San Marino". Nankinina tamin'ny fivorian'ny lohan'ny fianakaviana antsoina hoe "Arengo" notarihin'ny Rector ny governemanta.
Rehefa nitombo ny fiarahamonina dia voatendry ny Kapiteny Defender hizara ny andraikitry ny mpanatanteraka amin'ny Rector.
Tamin'ny taona 1243 vao nifidy ny hiasa mandritra ny enim-bolana ny Kaonsily roa voalohany, ny Captain Regent. fanendrena indroa isan-taona vita matetika nanomboka teo ka hatramin'izao, izay manamafy ny fahombiazan'ny andrim-panjakana.
Vonona ny hampiroborobo ny fifandraisana am-pilaminana sy ny finiavana hatrany ny Arengo ary namoaka ny lalàna voalohany, ny Statutes, aingam-panahy avy amin'ny fitsipiky ny demokrasia. Na dia tamin'ny 1253 aza dia misy porofo momba ny fisian'ny lalàna voalohany, tamin'ny 1295 dia misy ny lalàna voalohany ao amin'ny Repoblikan'i San Marino.
Ny fizakan-tenan'i San Marino
Noho ny fahendrena izay nanome aingam-panahy ny tanànan'ny San Marino taloha afaka, ny vondrom-piarahamonina dia afaka nandresy ireo toe-javatra nampidi-doza sy nanamafy ny fahaleovany tena.
Sarotra ny zava-nitranga teo amin'ny tantara ary matetika dia tsy azo antoka ny vokany, saingy ny fitiavana ny fahalalahana no nahafahan'ny tanàna afaka nitana ny fahafahany.
Ny Repoblikan'i San Marino dia nobodoin'ny tafika indroa, saingy nandritra ny volana vitsivitsy monja: tamin'ny 1503 avy amin'i Cesare Borgia, fantatra amin'ny anarana hoe Valentino, ary tamin'ny 1739 nataon'i Cardinal Giulio Alberoni. Ny fahalalahana avy tany Borgia dia tonga taorian'ny fahafatesan'ny mpanao jadona, raha ny raharahan'i Kardinaly Alberoni dia nampiasaina ny tsy fankatoavana sivily ho fanoherana izany fanararaotam-pahefana izany ary ny hafatra miafina dia nalefa mba hahazoana fahamarinana avy amin'ny Papa izay nanaiky ny zon'i San Marino ary namerina ny fahaleovantena.
Napoleon Bonaparte dia nanome voninahitra an'i San Marino
Tamin'ny 1797, Napoleon dia nanolotra fanomezana sy fisakaizana tamin'i San Marino ary koa ny fanitarana ny fari-taniny. Ny mponina tao San Marino dia feno fankasitrahana sy fanomezam-boninahitra tokoa noho ny fahalalahan-tanana toy izany, saingy nandà tamim-pahendrena voajanahary hanitatra ny faritanin'izy ireo, afa-po noho izy ireo manana ny "quo quo".
Tamin'ny 1849, rehefa voahodidin'ny tafika fahavalo telo i Giuseppe Garibaldi taorian'ny nianjeran'ny Repoblika Romana dia nahita fiarovana tsy nampoizina ho azy sy ireo namany tafavoaka velona tao San Marino izy.
Olom-pirenena manan-kaja Abraham Lincoln
Tamin'ny taona 1861 dia naneho ny fisakaizany sy ny fankafizany an'i San Marino i Abraham Lincoln rehefa nanoratra zavatra hafa tamin'ny kapiteny Regent izy hoe "Na dia kely aza ny fanapahanao, na izany aza ny fanjakanao dia iray amin'ireo hajaina indrindra mandritra ny tantara ..".
Ny tsy fiandanian'i San Marino nandritra ny Ady lehibe faharoa
San Marino dia mirehareha amin'ny fomban-drazana mampiantrano vahiny. Ity firenena afaka ity dia mbola tsy nanda fialokalofana na fanampiana an'ireo enjehin'ny fahantrana na fanararaotana, na inona na inona toe-piainany sy heviny. Nandritra ny Ady lehibe farany teo dia tsy niandany na iza na iza i San Marino, ary na dia mponina 15.000 monja aza ny isan'ny mponina ao aminy dia nanome fialofana sy fialokalofana ho an'ireo mpitsoa-ponenana 100.000 avy any amin'ny faritra manodidina an'i Italia izay voadaroka baomba.
Ny Repoblikan'i San Marino dia manana fifandraisana diplomatika sy consular amin'ireo firenena eoropeana sy tsy eropeana mihoatra ny fitopolo.
Izy io dia mpikambana ao amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena maro, toy ny United Nations Organisation (UNO) ary ny maro amin'ireo Programs, Funds and Agencies, toy ny United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the United Nations Children Fund ( UNICEF), ny Organisation momba ny sakafo sy ny fambolena (FAO), ny tahirim-bola iraisam-pirenena (IMF), ny Banky Iraisam-pirenena (WB), ny International Labor Organisation (ILO), ny World Health Organization (WHO), ny World Tourism Organisation (UNWTO) , ny International Aviation Aviation Organization (ICAO), ny International Maritime Organisation (IMO), ny World Intellectual Property Organisation (WIPO), ny Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon (OPCW). Izy io koa dia ao amin'ny Council of Europe and the International Criminal Police Organization (INTERPOL).
Ny Repoblika koa dia nifandray tamin'ny Vondrona eropeana nanomboka tamin'ny 1991; mandray anjara amin'ny Vondron'olona Parlemantera, ny Antenimiera Antenimiera ao amin'ny filankevitra any Eropa ary ny an'ny Fikambanana ho an'ny fiarovana sy ny fiaraha-miasa any Eropa (OSCE) miaraka amin'ny delegasion'ny filan-keviny.
Nanomboka tamin'ny Mey 1990 ka hatramin'ny Novambra tamin'io taona io ihany ary tamin'ny Novambra 2006 ka hatramin'ny Mey 2007, San Marino dia nitana ny fiadidian'ny komitin'ny minisitry ny filankevitra eropeana enim-bolana.
San Marino dia manana indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Vaovao misimisy momba ny fomba hitsidihana ny fitsidihana an'i San Marino http://www.visitsanmarino.com